टर्किस एयरलाइन्स र चन्द्रागिरी हिल्सबीच समझदारी - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
टर्किस एयरलाइन्स र चन्द्रागिरी हिल्सबीच समझदारी
कार्तिक १६, २०७४ 1873 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
टर्किस एयरलाइन्स र चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडबीच एक अर्काको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने समझदारी (एमओयु) भएको छ । एयरलाइन्सका महाप्रबन्धक अब्दुल्लाह ट्युनसर र चन्द्रगिरी हिल्सका महाप्रबन्धक अभिषेकविक्रम शाहले बिहीबार समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
समझदारीअनुसार टर्किस एयरलाइन्सका कर्मचारी तथा यात्रुले चन्द्रागिरी केवलकारको टिकट खरिदमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्ने छन् । छुट प्राप्त गर्न यात्रुले एयरलाइन्सको बोर्डिङ पास देखाउनु पर्नेछ । यस्तै, चन्द्रागिरीको भ्रमण गर्ने आन्तरिक तथा विदेशी पर्यटकले एयरलाइन्सबाट अन्तराष्ट्रिय उडानमा विषेश छुट प्राप्त गर्ने छन् । चन्द्रागिरीलाई अन्तराष्ट्रिय पर्यटकको प्रमुख गन्तव्यकारूपमा प्रवर्द्धन गर्न समझदारी गरिएको अब्दुल्लाले बताए ।
‘चन्द्रागिरी आन्तरिकमात्र नभई विदेशी पर्यटकको समेत प्रमुख गन्तव्य बन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘टर्किस एयरलाइन्सका यात्रुलाई पनि चन्द्रागिरी भ्रमण गर्न हामी प्रेरित गर्नेछौं ।’
एयरलाइन्ससँगको समझदारीले चन्द्रागिरी विदेशी पर्यटकको रोजाई बन्ने विश्वास बढेको शाहले बताए । अहिले कर्मचारी र यात्रुलाई छुट दिएर एक अर्कालाई प्रवर्द्धन गर्ने तथा भविश्यमा विभिन्न अफर कार्यक्रम सञ्चालनको योजना रहेको उनले बताए ।
विदेश घुम्ने अफर कार्यक्रम ल्याइने
टर्किस एयरलाइन्सले चन्द्रागिरी हिल्सको भ्रमण गर्ने आन्तरिक पर्यटकका लागि विदेश घुम्ने अफर दिने भएको छ । नोभेम्बर १५ देखि डिसेम्बर १५ सम्म चन्द्रागिरीको भ्रमण गर्नेले अफर कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन पाउने एयरलाइन्सले जनाएको छ । भ्रमण गर्ने पर्यटकमध्ये गोला प्रथाबाट छनोट हुनेलाई विदेश यात्राको अवसर मिल्नेछ । चन्द्रागिरीले पनि एयरलाइन्सका यात्रुलाई निशुल्क टिकटको अफर ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको शाहले बताए ।
सन् १९३३ मा स्थापना भएको टर्किस एयरलाइन्सले विश्वभर २ सय ५१ स्थानमा अन्तराष्ट्रिय उडान गर्ने गर्दछ । एयरलाइन्सले काठमाडौं–स्तानबुलका लागि सातामा ५ उडान भर्दै आएको छ ।